Kenya: Rag beeniyey in ay Burcad-badeed yihiin oo lagu xukumay min Shan sano oo xarrig ah – Radio Daljir
Kenya: Rag beeniyey in ay Burcad-badeed yihiin oo lagu xukumay min Shan sano oo xarrig ah
Luulyo 31, 2013 3:20 b 0
Nairobi, July 31, 2013 – Maxkamad ku taala magaalada Mombaza dalka Kenya waxay xukunno kala duwan ku riday koox Burcad-badeed Soomaali ah, kuwaasi oo mudo ku xirnaa xabsi ku yaala dalkaasi Kenya.
Wargayska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray maanta, in kooxda Burcad-badeeda Soomaalida ah lagu xukumay midkiiba 5 sano oo xarrig ah, kadib markii lagu cadeeyey falalka ay galeen.
Ragga la xukumay ee Burcad badeeda ah ayaa lagu sheegay Sagaal ruux, kuwaasi oo ku eedeysan in ay afduubteen Markab laga leeyahay dalka Germalka sanadku markuu ahaa 2009.
Maxkamada ku taala Mombaza ee xukuntay Burcad-badeeda waxaa la keenay cadaymo muujinaya in raggaasi ay Markabka ku weerareen hub kala duwan oo isugu jira, Gantaalo, AK47, Bistoolado iyo qoryo kale.
Burcad-badeeda la xukumay waxay ku jireen xabsi ku yaala Kenya ka hor inta la aan la xukumin, waxaana war-bixinta lagu qoray Wargayska Daily Nation ay sheegaysaa in raggaasi ay beeniyeen in ay ku jireen falal Burcad-badeednimo.
Meelo badan oo ka tirsan caalamka waxaa? lagu xukumay rag ka tirsan Burcad badeeda Soomaalida bilihii ina dhaafay, waxaana jira xabsiyo kala duwan oo aduunka ah oo ay kooxaasi Burcad badeeda ah ?lagu hayo iyagoo ah xukun sugayaal iyo weliba kuwa kale oo la xukumay.
Ciidamo huwan ah oo isugu tegey Qansax-dheere iyo abaabul ka dhan ah Shabaab oo halkaas ka socda